Accueil > Gazetin'ny nosy > Sevaky Mitantehy gny Soa « SMS »: Nanampy ny be antitra teny amin’ny Foyer de vie
Sevaky Mitantehy gny Soa « SMS »: Nanampy ny be antitra teny amin’ny Foyer de vie
Fikambananan’ny vehivavy mpanao asa soa iray antsoina hoe SMS (Sevaky Mitantehy gny Soa) na ny « vehivavy miandrandra ny soa » izay ivondronan’ny vehivavy avy amin’ny faritany enina eto Madagasikara. Mikarakara sy manao asa soa ho an’ny reny sy ny zaza ity fikambanana ity. Hiezaka amin’ny fanampiana ny fikambanana manao asa fanasoavana ny mpiara-belona ny SMS manomboka izao. Nahatsapa ireto mpikambana ireto fa mila mifanampy ny Malagasy ka izay afaka manampy dia tokony hivondrona ka hanao izay azony hatao ho fanomezan-tànana ny mpiray tanindrazana aminy, hitarika ny mpiara-belona aminy amin’ny fialana amin’ny fahantrana izao.
Raha nanontany ny filohany ramatoa Zafimiary Eulalie izay kaomisera misotro ronono amin’izao fotoana izao sy ramatoa Rachelle R. izay sekretera jeneralin’ny fikambanana dia nanambaran’izy ireo fa ny tarigetran’ny fikambanana dia: “mioty, miasa ary mivoatry”. Noho izany dia hanao izay azony hatao ny fikambanana hanampy ny mpiara-belona aminy.
Ny “Foyer de vie”, izay misy ny fitaizana sy fikarakarana ny be antitra tetsy Antanimora no nanombohan’izy ireo ny asa soa nataon’izy ireo ny zoma faha 09 martsa 2018. Nanampy ireo olona 30 karakarain’ity fikambanana ity izy ireo. Izany dia noho ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy, satria vehivavy daholo no mpikambana ao amin’ny SMS. Mofo mamy, savony, ronono mandry ary “farilac” no nentin’izy ireo tampin’izany.
Voalazan-dramatoa Eulalie fa hiitatra hatrany amin’ny fanampiana ny hôpitaly CSBII, ny zaza teraka mialoha (tsy tonga volana), ny fitaizana zaza kamboty izy ireo sy ny sisa.
Mbola tanora tokoa ny fikambanana satria mbola ny volana febroary 2018 teo no niforona, nefa dia izao efa manatanteraka ny vina nifanarahan’izy ireo izao.
Vehivavy tapa-kevitra tanteraka fa hanampy ny mpiara-belona aminy ireto mpikambana amin’ny SMS ireto satria sady efa nahita fiainana marobe no manana fitiavan-tanindrazana koa satria olona efa mba fantatra avokoa ny mahakasika azy ireo. Irariana ny Malagasy maro mahatsapa fa ilaina ny mifanampy mba ho maro no toa izao.
Fanamparam-pahefana: Tsy mahay misintona lesona ry Rolly Mercia
Rehefa ny mpitondra fanjakana no tsy mahazaka demokrasia, tsy tia fanakianana na fitsikerana avy amin’ny hafa, dia ny akon’izay voalohany indrindra ao aminy, ny misakana amin’ny fomba rehetra mety hanehoan’ny hafa ny heviny, na amin’ny alalan’ny gazety na amin’ny alalan’ny haino aman-jery na amin’ny alalan’ny fanakanana famoriam-bahoaka anazavana hevitra.
Rehefa ny mpitondra fanjakana no mahatsapa tena fa tsy ahitam-pahombiazana amin’izay tokony ho anjara andraikiny amin’ny vahoaka dia mitady irika izy hanakonana izany, ka iray amin’ireny ny fanaovana jadona sy ny fandraisana fepetra tsy mifanaraka amin’ny lalàna velona sy mety hifanohitra koa amin’ny rariny sy ny hitsiny. Azo adika ho fanamparam-pahefana izany fihetsika izany.
Nandritra ny 57 taona dia saika hita taratra teo amin’ireo mpitondra nifandimby nitantana teto izany rehetra izany, fa azo faritana ho tena henjana kosa ireo tamin’ny Repoblika voalohany, Repoblika faharoa, fitondrana Ratsiraka tamin’ny Repoblika fahatelo sy ny fitondrana Ravalomanana. Vao mainka miseho lany sy mihamafy izany amin’izao fitondrana Rajaonarimampianina izao.
Tranga iray vao niseho tany Nosy Be ny zoma tokoa mantsy izao, ohatra, ny fanamparam-pahefana nataon’ny fitondram-panjakana foibe avy aty Antananarivo, izay nanakatona ny onjam-peo (Rario) “Tikomeva Ylang” (Fm 91), izay an’ny mpanao politika Joseph Yoland.
Mazava ho azy aloha fa raha olona nanohana ny fitondrana i Joseph Yoland dia tsy ho nokitihina mihitsy ny radiony na inona tsy fanarahan-dalàna mety ho nataony na inona fandikan-dalàna mety ho vitany. Satria izy isan’ireo nijoro ho mpanohitra ny fitondrana Hvm ary tsy mitsitsy fitenenana amin’ny tsy mety ataon’ny fitondrana, dia fanaon’ny mpitondra mpanampatra fahefana ny mikaroka irika hamelezana ny mpanohitra azy, eny tonga hatramin’ny famoronana antontan-taratasy hanamarinana ny fikapana ny lohany.
Niseho izany faha-Ravalomanana, ary aty aoriana moa ity filoha teo aloha ity dia vaky barara niaiky fa “ny fanenjehana ara-pitsarana rehetra natao tamin’i Pierrot Rajaonarivelo tamin’ny fitondrana notarihiko (Ravalomanana) dia noforoninay mpitondra fanjakana avokoa”.
Dia nanara-davahana an’izany ny fitondrana Hvm ka izao isan’ny ianjadian’ny fanamparam-pahefana izao ny mpanohitra Joseph Yoland amin’ny alalan’ny fanakatonana ny onjam-peony ao Nosy Be izay tena mahasarika ny vahoaka maro any an-toerana satria marolafy ny vaovao mivoaka ao, ary miezaka mampiseho hatrany ny maha-matihanina azy ireo miandraikitra an’io onjam-peo io.
Efa tany amin’ny taona 1995 tany no naha-radio an’ity radio tantanin’i Joseph Yoland ity fa sahin’ny fitondrana Rajaonarimampianina ankehitriny ny manakatona azy amin’ny fomba feno fananamparam-pahefana.
Dia tsy mba tsaroan-dry Rolly Mercia, minisitry ny fifandraisana ankehitriny ve, fa ny nanakaton-dRavalomanana ny fahitalavitra Viva tamin’ny Desambra 2008 ange no nitarika ny fidarabohan’ny fitondrana Ravalomanana tamin’ny martsa 2009? Sa mbola marina hatrany ny fanamarihan’i Pety Rakotoniaina hoe “sady tsy mitana ny teny nomeny sy nampanantenainy ny mpitondra ankehitriny no tsy misintona lesona tamin’ny zavatra nitranga teto, no tsy mihaino ny hafa”?
Tohizo ihany àry ny fanamparam-pahefana fa sady hahasoa anareo mpitondra io no hahafahan’ny firenena misandratra amin’ny 2030 e! Tandremo fa tsy misy havelan’ny vahoaka hitsoaka handositra hanao sesitany ny tenany any ampita intsony eto an!